China abakhiqizi be-FRP Door nabaphakeli | I-Beihai Fiberglass
1.isizukulwane esisha esisebenza ngemvelo nesinamandla okusebenza kwemvelo, sihle kakhulu kunangaphambilini sokhuni, insimbi, i-aluminium kanye nepulasitiki. Iqukethe isikhumba samandla aphezulu se-SMC, i-polyurethane foam core kanye nohlaka lweplywood.
okonga amandla, okonga umoya,
ukushisa ukwahlukanisa, amandla aphezulu,
isisindo esincane, anti-corrosion,
isimo sezulu esihle, uzinzo ntathu,
isikhathi eside sempilo, imibala ehlukahlukene njll.
Umnyango we-FRP ngumnyango wesizukulwane esisha-olungele imvelo nokusebenza kahle kwamandla, omuhle kakhulu kunangaphambili wokhuni, insimbi, i-aluminium kanye nepulasitiki. Iqukethe isikhumba samandla aphezulu se-SMC, i-polyurethane foam core kanye nohlaka lweplywood. Ifaka ukonga amandla, i-eco-friendly, ukufudumeza ukushisa, amandla aphezulu, isisindo esincane, i-anti-corrosion, isimo sezulu esihle, ukuqina kobukhulu, ubude besikhathi sokuphila, imibala ehlukahlukene njll.
● Ukujabulisa ubuhle
1) Ukufana kweqiniso komnyango wokhuni lwe-oki langempela
2) Imininingwane ehlanganisiwe ye-woodgrain ekwakhiweni konke
3) Isikhalazo esihle somgwaqo
4) Ukucaciswa okuphezulu kwephaneli
5) Ukubukeka okuthuthukisiwe nokubukeka
● Ukusebenza Okuphakeme
1) Amapulangwe eminyango ye-fiberglass ngeke avele, ukugqwala noma ukubola
2) Uhlaka lokusebenza oluphezulu lumelana nokushintshwa kombala nokusonteka
3) Umkhawulo ohlanganisiwe olinganiselayo ungena ekungeneni komoya namanzi
● Ukusebenza Kwezokuphepha Namandla
2) igwebu lamahhala le-CFC
3) Ubungani bemvelo
I-4) i-16 `` block block kanye ne-jamb security plate imelana nokungena ngenkani
5) I-foam compression weatherstrip ivimbela izingxenye
6) ingilazi kathathu yokuhlobisa ingilazi
Imininingwane yomnyango we-fiberglass
1.SMC umnyango Isikhumba
Izinto zeshidi le-SMC zibekwa phezu kwesikhunta futhi ziyafudunyezwa futhi zicindezelwe ngomshini, bese zipholile futhi zakheke
1). Sinezinhlobo ezintathu zokuqedelwa kobuso (i-Oak, Mahogany, Smooth)
2). Ukucaciswa kwesikhumba somnyango we-SMC
● I-Thicknee: 2mm
● Umbala: Mhlophe
● Usayizi: 2138 * 1219 (Max)
● Ingxenye: I-fiberglass, i-polyester engagcwaliwe, isitayela, ukugcwaliswa okungaphili, i-Zinc stearate, i-Titanium oxide
Ukwakheka komnyango wethu we-SMC
Uhlaka lwamapulangwe (skeleton) + isikhumba somnyango se-SMC (2mm) + i-PU foam (density 38-40kg / m3) + PVC onqenqemeni (oluvalwe ngamanzi). Ubukhulu bomnyango bungu-45mm (empeleni ingu-44.5mm, 1 3/4 ”)
Umbala womnyango we-3.FRP
Ngokuvamile, umnyango ophelile upendiwe ngemva kokuba usuqediwe. Ingahlukaniswa ngopende wokufafaza nopende owomile wesandla (Ukugcoba). Upende opendwe ngesandla ubiza kakhulu, kepha umbala ungaphezulu kathathu futhi imigqa ifana nempilo
Umklamo we-4.FRP door (Designs Door Designs)
Ukuhlukaniswa komnyango we-5.FRP
Langaphambilini Uhlaka lwembali le-FRP
Olandelayo: I-E-ingilazi Ethungwe I-Strand Mat